Xogta sawirka ka baxsan: Muxuu yahay sideese ku garan kartaa? Androidsis
Waa maxay xogta Exif ee sawir ah iyo sida loo ogaado
Waqtigan xaadirka ah waxa ugu caadiga ah waa inaan sawirro ka qaadno adoo adeegsanaya taleefankayaga Android. Kaamirooyinka ku jira taleefannada ayaa si aad ah u fiicnaaday, taas oo noo oggolaaneysa inaan ugu adeegsanno dhammaan noocyada xaaladaha. Sawir kasta oo aan qaadno wuxuu leeyahay taxane xog muhiim ah oo ku saabsan. Kuwaas waxaa ka mid ah xogta Exif, taas oo u eg inay u egtahay qaar idinka mid ah.
¿Runtii maxay tahay xogta Exif ee sawirka? Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan wixii ku saabsan xogtaan hoose. Waxaan sidoo kale kaa tagnay wadada taas oo aan ugu heli karno kuwan qaab fudud taleefankayaga Android ka ah. Waan sameyn karnaa adigoon rakibin codsiyada dhinac saddexaad.
1 Waa maxay xogta Exif ee sawirka
2 Soo gal xogtaan
Waa maxay xogta Exif ee sawirka
Xogta Exif dhab ahaantii waxay ka jawaabtaa Faylka Sawirka La Beddelayo. Waa taxane xog ah oo keydinaya macluumaadka la xiriira mid kasta oo ka mid ah sawirrada aan ku soo qaadnay kaamirada taleefankeenna. Macluumaadkan waxaa loola jeedaa dhinacyo kala duwan, oo aan kaaga sheegi doono xagga hoose. Waad ku mahadsantahay xogtaan waxaan wax yar ka ogaan karnaa qaabka loo qaaday sawirkan.
Xogta Exif waxay u qaybsan tahay afar qaybood, si aad u hadasho. Maaddaama ay nooga tagayaan macluumaad ku saabsan afarta dhinac ee sawirka la sheegay. Waxa aan ogaan karno markaan hubinno xogta la yiri waa kuwa soo socda:
Xaqiiqooyinka kamaradda: Model, soo saaraha ama tirada taxanaha ah ee isku mid ah
Xaqiiqda ku saabsan tallaalka: Waqtiga soo-gaadhista, furitaanka, adeegsiga birjig ama in kale, xasaasiyadda ISO, iwm.
Macluumaadka ku saabsan sawir qaadista: Xallinta sawirka, cabirka, ha ahaado sawirkii asalka ahaa ama ha la gooyay ama dib loo habeeyay
Xogta asalka: Taariikhda iyo waqtiga goorta la sameeyay ama joogitaanka xuquuqda lahaanshaha.
Sidaa darteed waxay na siinaysaa macluumaad badan oo ku saabsan sawir qaas ah. Dhammaan sawirrada lagu qaaday taleefannada casriga ah waxay leeyihiin xogtan Exif. In kasta oo ay tahay macluumaad aanaan inta badan helin. Xaqiiqdii, xaaladaha badankood habka aan ku heli karno macluumaadkan ku saabsan Android. Laakiin waxaa jira qaab aad u fudud.
Sida looga hortago Sawirada Google inay keydsadaan shaashadahaaga
Soo gal xogtaan
Haddii aad qorsheyneyso inaad hesho xogta Exif ee sawir aad ka qaadatay Android, waxaa jira qaab si gaar ah u fudud. Waxaan u isticmaali karnaa barnaamijyada qaarkood, sida barnaamijyada tafatirka sawirrada, si aan ugu helno macluumaadkan. Laakiin haddii aadan haysan mid ka mid ah barnaamijyadan lagu rakibay taleefankaaga, markaa runti maahan wax u qalma. In kastoo uu jiro barnaamij aan caadi ahaan rakibnay telefoonka, taas oo noo ogolaaneysa inaan tan sameyno.
Waxaan u isticmaali karnaa Sawirada Google si aan u galno xogtaan Exif sawir kasta. Sidaa darteed, haddii aad dalabka ku haysato taleefankaaga Android, waxay noqon doontaa xulasho aad u faa'iido badan. Waxa kaliya ee lagu sameeyo dareenkan ayaa ah in la aado sawir kasta oo laga qaaday taleefanka oo aan horey ugu keydinay arjiga. Marka ilbiriqsiyo gudahood waxaan ku arki karnaa xogtaan shaashadda taleefanka.
Waa inaad ka furtaa Sawirada Google taleefankaaga Android. Marka xigta waa inaan u tagnaa kaliya sawir qaas ah oo aan raadineyno. Sawirka gudihiisa waxaan gujineynaa saddexda qodob ee toosan qeybta kore ee midig, si markaa menu macnihiisu u muuqdo. Waxaa ka mid ah xulashooyinka ka muuqda meeniska la yiri waa macluumaadka. Daaqad cusub ayaa markaa ka furi doonta barnaamijka.
Marka, sawirka hoostiisa waxaan arki karnaa dhammaan xogta ku saabsan sawirkan. Sidan ayaan marwalba u helnaa xogta Exif sawir kasta oo aan ku qaadno kamaradda taleefanka. Waxaa laga yaabaa inay xiiso leedahay in la arko sawirro qaar oo la mid ah, si loo arko haddii aan ku isticmaalnay qaabeyn ka duwan kamaradda, maadaama habkan aan ku ogaanno qaabeynta noogu xiisaha badan xilligan. Sideed u aragtaa khiyaanadan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Waa maxay xogta Exif ee sawir ah iyo sida loo ogaado
HTC U12 + wuxuu ugu dambeyntii helayaa Android Pie